कुनै बेला चमकधमक रहेको उनको जिन्दगी अहिले बेसहारा – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/कुनै बेला चमकधमक रहेको उनको जिन्दगी अहिले बेसहारा
मेरो अनुरोध? हाम्रो सानो सहयोगले निशा पुरानै अवस्थामा फर्किन सक्छिन्,’ उनले सहयोग गर्न चाहनेहरुका लागि पनि सम्पूर्ण विवरण दिएका छन् । त्यसैले सहयोगी मनहरुले सनराइज बैंकमा निशाका बुवा प्रेम प्रसाद घिमिरेको नाममा रहेको खाता नम्बर ०८४०६१३६१३२०५००१ मा सहयोग गर्न सक्नु हुनेछ । निशाको परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारण सक्ने सवैमा सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गरिएको छ । सहयोगका लागि मोडल निशाका बुवालाई सिधा सम्पर्क प्रेम प्रसाद घिमिरे ९८५१२३८९५२ मा गर्न सक्नुहुन्छ । उनको शिघ्र स्वास्थ्य लाभका भगवान् पशुपतिनाथ सँङ्ग यहि प्राथना गर्दछु !
सक्किगोनीका कुमार कट्टेल ‘जिग्री’को आज जन्मदिन कति बर्षा लागे उनि ?